China Double Jacketed Gasket ထုတ်လုပ်သူများ၊ ထောက်ပံ့သူများနှင့်စက်ရုံများ - Taifno PTFE
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Gaskets > Double Jacketed Gaskets > နှစ်ဆ Jacketed gasket
နှစ်ဆ Jacketed gasket
Double Jacketed Gasket (DJG) ကိုဂရပ်ဖိုက်၊ ကြွေထည်၊ asbestos အစရှိသည့်သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ ကြေးနီစသည့်ပါးလွှာသောသတ္တုအိတ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ဂေါက်ဖိုက်၊ ကြွေထည်၊ ကြွေပြားမှပြုလုပ်ထားသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်တင်းခြင်းအားဖိအားအခြေအနေများ၊ အပူချိန်များနှင့်ချေးခြင်းများမှကာကွယ်ပေးသည်။
နှစ်ဆ Jacketed gasket (DJG) is made from graphite, ceramic, non-asbestos etc. filler covered with thin metal jacket, such as stainless steel, carbon steel, copper etc. By their sealing efficiently, provide outstanding resilience, while the metal jacket guarantees excellent sealing and protects the filler against pressure conditions, fluctuating temperatures and corrosion.
နှစ်ထပ် Jacket ရိုးရိုး gasket
နှစ်ဆ Jacket မြှောင်းပုံ gasket
နှစ်ဆ Jacketed gasket is particularly suitable for sealing flat surfaces of heat exchanges, gas pipes, cast iron flanges, cylinder heads of engines as well as for boilers and other vessels.
သူတို့၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအားဖြင့်အနားကွပ်စက်ဝိုင်းများအပေါ်တွင်ပြင်းထန်သောဖိအားပေးခြင်းဖြင့်ပေးသည့်သတ္တုအကျီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော gaskets များသည်ကန ဦး အထူမှ ၃၀% အထိသွေဖည်သည်၊ ၎င်းသည်မမှန်သို့မဟုတ်ပျက်ယွင်းနေသည့်အနားကွပ်အနားကွပ်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သတ္တုနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခံရသည့်အလတ်စားတို့၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလိုက်ဖက်မှုကိုစဉ်းစားသင့်သည်။
၂၀ ~ ၃၀
အခြားအထူးသတ္တု Ti, Mon 400 ကိုလည်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောဂရပ်ဖစ်၊ ASB၊ Non-asb
Taifno PTFE သည်နှစ်ဆအကျိတ်ဂတ်ထိုး gasket ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြိုဆိုသည်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူ၊ ကုမ္ပဏီ၊ လက်ကား၊ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး၊ စျေး၊ အမှတ်တံဆိပ်
မှို PTFE စာရွက်
ဖန်မျှင်အမျှင် PTFE ဖြည့်
PTFE Valve Ring ကို